केही समय यता विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विभिन्न हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उक्त समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
सो पार्टीका अधिकांश नेता अचेल लगभग भूमिगत रहेका छन्। उक्त पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका छोरा प्रकाश चन्द भने अहिले चितवनको एक चिकित्साशास्त्र कलेजमा एमबीबीएसको पढाइ पूरा गर्ने क्रममा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
प्रकाश चन्द सो पार्टीको स्वास्थ्य संगठनको केन्द्रीय महासचिव पनि रहेका छन्। उनलाई चाहिँ उनको बुवाको नेतृत्वमा रहेको संगठनले गरेका गतिविधि कस्तो लाग्दैछ? उनीसँग यसै साता बीबीसी नेपाली सेवाका चितवनस्थित संवाददाता ईश्वर जोशीले कुरा गरेका थिए।
किन डाक्टरी किन पढ्न भएको ?
तपाईँका बुबा विप्लव निकै चर्चामा हुनुहुन्छ । अहिले तपाइँ उहाँको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
व्यक्तिगत र भावनात्मक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँ जहाँ भए पनि सुरक्षित हुनुस् र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुस् भन्ने भइहाल्यो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने अहिले उठाएको क्रान्तिको जुन लाइन छ त्यसलाई छाड्नु हुँदैन। हिजो १० वर्षको जुन पीडा भोगेका छौँ त्यसलाई भुलाउने गरी, विजयको झण्डा लहराउने गरी अनि हजारौँ शहीदहरूको सपना पूरा गर्ने गरी क्रान्तिको मार्गदर्शन नछाड्नुस् भन्ने हो। जस्तो किसिमको बलिदानी दिन पनि हामी तयार छौँ।बुवासँग कुराकानी नियमित हुन्छ ?
बुवाले तपाइँलाई के भन्नुहुन्छ, अथवा यो गर त्यो नगर भन्ने के सुझाव दिने गर्नुहुन्छ ?
तपाइँजस्ता मान्छेलाई अब तपाइँको बुवाको आव्हानमा मार्न र मर्न पनि हिचकिचाउन नहुने स्थिति आइपर्न सक्छ । तपाइँ मान्छे बचाउन लाग्ने तरखरमा हुनुहुन्छ । कुरा नमिले जस्तो लाग्दैन ?
बुर्जुवा शिक्षा भनेर आलोचना गर्ने तर आफ्ना छोराछोरीलाई त्यही शिक्षा दिलाउने अनि जनताका छोराछोरीलाई मर्न पठाउने भनेर आलोचना हुनेगरेको छ नि तपाइँको बुवाको ?
तपाइँ जस्तो डाक्टर पढ्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । तपाइँको खर्च कहाँबाट जुट्छ ?
तपाइँ महँगो मोटर साइकलमा चढ्नुहुन्छ भनेर आलोचना हुने गरेको छ । आम्दानीको स्रोत के हो ?
वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?